Ku ukuthenga igama le domaine elahla okanye elidlulayo (eyaziwa ngokuba: ukuyeka ukubamba) akuyiyo imisebenzi engekho mthethweni ngokwalo: uthengisa imimandla engabhalwanga mNTU kwaye ukuba uthetha ukuwasebenzisa ngokusemthethweni (kwiinjongo zobuqu okanye zentengiso), Ngoko ungumlawuli oqhelekileyo, kungekhona isela .
Brebis, ukuba ube ngumlawuli omeleyo kuthetha ukuba ufanele uqiniseke ukuba amagama othengiweyo awunalo uphawu-oko kungabonakali iimpawu zokurhweba ezibhalisiweyo-ngaphandle koko, unokuba noxanduva cybersqu. Emva koko, kukho abalawuli beendawo ezizithengayo ngeenjongo zokuthengisa, kwaye oku kungenye into esemthethweni.
Ngelishwa, ayingabo bonke abathengisi abasebenza kakuhle. Ezinye zezokuthetha ngokucacileyo, zixakile nje ukuba babone isizinda esithile-ukuba bayayifumana inomdla ngegama lakhe, i-PageRank, ikhonkco elidumileyo, i-Alexa okanye i-mozRank-baya kusetyenzisaa kaumahu ka lombhalisi okanye uzame ukwaphula imfihlo zabo.
Ngokubanzi, ukubuyela umva kuthathwa njengento esemthethweni, nangona kunjalo kuyingozi kumthengi. Ngapha koko, i-Backorder ayikho into ngaphandle kwethemba lokufumana igama lesizinda, ngolunye usuku, kodwa obhalisayo wangoku unokuvuselela i-domain nangaliphi na ixesha ngaphambi kokuba ehle, ekhalela ukuthengwa. Imida yeDomain iyabiza xa kuthelekiswa namaxabiso asisiseko asezantsi, ngoko ke ayisoloko iyinto yokuqala ekufuneka uyiqwalasele xa ufumana igama lesizinda. Nazi ezinye zewebhusayithi ezidumileyo zokwenza isetyhula:
Okwangoku ubhalisa igama elitsha le-domain, umbhalisi wakho uyakufaka i-Domain Lock ngokuzenzekelayo. Verrouillage de domaine I yindlela yokhuselo ekwala ukuhanjiswa okungagunyaziswanga kwegama lakho lesizinda kwabanye ababhalisi, kodwa unokufuna ukuyikhubaza okwethutyana ukuvumela ukudluliselwa okanye ukwenza ezinye iinketho. Ngayiphi na imeko, nikela ingqalelo kwindima ebalulekileyo edlalwe kolu khetho kwaye ukhumbule ukwenza kwakhona emva kokuba ugqibile, kuba le yinkqubo ekhuselekileyo yokunqanda abanqolobi abakhohlakeleyo ukinda banguba sak.
Nanku umzekelo wesiphumo esingakhuselwanga .com domaine iziphumo ze-WHOIS, ezibandakanya iinkcukacha zomgcini
Zonke iimbuzo ze-WHOIS ezikhuselekile zibuyisela ulwazi olubanzi malunga nobhalisi kwaye akukho nto enye. Ukujonga ulwazi lwakho lwe-WHOIS, ungasebenzisa iinkonzo ezifana I-WHSR Web Host Spy ou who.is, okanye ukuba usebenzisa i-OS basé sur e-UNIX, qhafaza nje kwisiphelo sakho:
I-123 Reg 4,99 € / ngonyaka
Allez papa 7,99 $ / ngonyaka
Igama eliphantsi gratuit
ZeNethiwekhi Iingxaki 9,99 $ / ngonyaka
Yenza icaciswe ngebhanner yephepha lasekhaya okanye inkunkuma, apho uthetha ukuba zonke iziphakamiso ukuthenga idilesi yakho ziya kugxothwa ngokuzenzekeleloo. Ukuba irejista yakho ivumela «igama lombutho« okanye »idilesi yesitrato eyongezelelweyo», sebenzisa enye ethi «DOMAIN HAYI UKUZE Kuthengise». Esi sicwangciso siza kunciphisa amathuba okuba i-domainer ifikelele kuwe nge-imeyile ukucela isicatshulwa.
Domaines I-Sly ifihlakeleyo: bazama ukukuphatha, ukukhupha umkhuseleko wakho kunye nentembelo ukuze bafike ekufumaneni i-domain yakho ngaphandle kwemvume yakho.